Realme na-ekwuputa ọkwa mbụ ya na ahịa China | Gam akporosis
Anyị na-adịbeghị anya kọrọ banyere ụlọ ọrụ na-ezube ịbanye mpaghara gị na taa, ụlọ ọrụ ekwuputala ọkwa ya na China.
Mgbe ọ na-ekwupụta ọkwa ahụ, onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru nke ahụ ika ahụ ga-enye ahụmịhe pụrụ iche n'otu ọnụahịa ahụ na na lekwasịrị ndị na-eto eto.
China bụ ahịa kachasị ama n'ụwa ugbu a, yana nsonaazụ, ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ire ngwaọrụ ya karịa. A na-atụ anya Realme ịbanye Middle East na ahịa Europe na njedebe nke afọ a. Nke a na-eme ka ọ pụta ìhè na mbụ sub-ika nke Oppo nwere oke ochicho.
Ugbu a, Realme nwere ọnụnọ na mba asaa, gụnyere India, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Egypt na Philippines. Ugbu a, mba abụọ ọzọ agbakwunyere na ndepụta: China na Taiwan. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọ ga-abụ na nke ikpeazụ.
Na smartphones na obere akpa gị, Realme jisiri ike nweta ọganiihu na ahịa India.ma ọ bụ. Naanị otu afọ mmalite ya, ụlọ ọrụ ahụ enweta 8% nke ahịa ahịa nke smartphones na India. Nke a abụghị obere ma gosipụta egwuregwu dị mma nke ụlọ ọrụ ahụ nwere, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-emepụta ekwentị na-enwe ọnụnọ kachasị na ahịa India.
Companylọ ọrụ ahụ amalitebeghị smartphones ọ bụla na China, n'ezie. Realme 3 Pro nwere ike ịbụ n'etiti ndị smartphones mbụ dị na ya. Emepere etiti a n'India na mbido izu a, ọ ga - abụkwa nke akachasị akwalite site na ika ozugbo ọ malitere ikwusa repertoire nke mobiles na Asia buru ibu, ebe ọ bụ na, ugbu a, ọ bụ mpako kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme na-ekwuputa ọkwa mbụ ya na ahịa ndị China
Egwu isii ewepụrụ na Google Play maka aghụghọ ad
Huawei malitere inye ndozi maka ekwentị ya na ọnụahịa dị ọnụ ala